Nnora yɛsuaa afa mmoa a wɔte nsuo ase. Yɛsuaa afa nsuomnam a wɔn mu bebree wɔ hɔ na deɛ wɔwe nsuomnam na wɔba nkabom sɛ wɔwe wɔn nyinaa, te sɛ nnomaa a wɔdware asuo, bonsu, ne nsuomnam akɛseɛ akɛseɛ.
Afei yɛsuaa afa gyata ho. Berɛ a osuo na ɛba bɛtɔ no, mframa bɔ na obobiri rentumi nte sɛ ɔba. Nti ɛnyɛ den sɛ gyata kye no.
Nso, sakraman wɔ hɔ a ɛte sɛ ɔsɔ a wɔte Zambia mu. Wɔn honam yɛ ankaahono na wɔn nam no a wɔyɛ mmoa a wɔte asaase ase na wɔtumi hu wɔn yie. Nti gye sɛ wɔhwɛhwɛ kwan a wɔtumi kye wɔn. Wɔtaa tu amuna anaa wɔ hu mframa wɔ tokuro no mu akye wɔn aduane. Afei nso sakraman nante brɛoo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmoa nketewa rente sɛ wɔba. (wɔn ntumi nhu yie.) Afei nso mmoa no bi na wɔnante akyiri dodo firi wɔn tokuro na sakraman no kye wɔn.
Ntetea a wɔte anweatam nso wɔ hɔ. Berɛ a mmoa no nyinaa kɔ hinta wɔ baabi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a owia mmɔ wɔ wɔn so no, ntetea na wɔba sɛ wɔde mmoawa a wɔawu de aba fie. Nanso mmoawa bi wɔ hɔ a wɔn nso wɔpɛ sɛ wɔwe ntetea no te sɛ ananse ne mmoawa afoforɔ. Afei nso mframa bɔ a, ɛde ntetea no kɔ.
Nanso wei nyinaa akyi no wɔduru wɔn fie na wɔwɔ aduane ama ntetea kuo no nyinaa.
Afei mfɔteɛ wɔ hɔ na wɔkyɛ mfeɛ enum ansa na wɔsi wɔn fie wie no. Wɔ wie no na mfɔteɛ nketewa ba na wɔnyini wie no na wɔ fi ase tu kɔ wiem. Afei, mmoawa bi wɔ hɔ a wɔ ba mfɔteɛ dan no abɔnten na wɔhyerɛn kanea. Wɔyɛ saa no na mfɔteɛ ba wɔn hɔ ɛfiri sɛ wɔpɛ kanea. Ɛno akyi saa mmoawa na wɔkye wɔn we.
This entry was posted	on Wednesday, June 3rd, 2020 at 8:46 am	and is filed under Twi. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.